"Johnny ngekhanda": nabalingisi izindima
"Dzhonni Mnemonik": nabalingisi izindima
"Johnny ngekhanda" - Umdwebo isitayela cyberpunk, ezithathwe 1995. Kuyinto omunye ekuseni usebenza Keanu Reeves, okuyinto ethandwa kakhulu abalandeli umlingisi. I emangalisayo indaba ifilimu futhi ubani ke yathola main indima?
Abadali futhi indzaba lemfisha izithombe
"Johnny ngekhanda" wayeqondiswa Robert Longo, owazalelwa e-1953 esifundeni eBrooklyn, eNew York. Phakathi ukuthwetshulwa isithombe Longo guided izikripthi wadala okusekelwe inoveli eponymous uWilliam Gibson.
Longo ifilimu - Kuyinto ejwayelekile isibonelo cyberpunk: uhlobo, elichaza anti-nakancane izwe ephezulu ubuchwepheshe. Kuleli zwe Inthanethi kanye nolwazi ingafeza lukhulu. Futhi umlingiswa oyinhloko okuthiwa Johnny esihambisana naye mayelana nalesi ngempela umkhakha onzima: enikela kusukela iphuzu "A" ukhombe "B" esiningi idatha usebenzisa ingqondo yakho siqu. Ngalesi Johnny iholo elihle.
Kodwa ngolunye usuku, insizwa uthola oda kuyingozi kakhulu. Ukuze ulwazi yisiphepho ngekhanda ekhanda abazingela yangempela mafia Japanese. Futhi usizo Johnny kuyinto umuntu singenakwenzeka uzokwazi ...
"Johnny ngekhanda": nabalingisi izindima. Kianu Rivz futhi yakhe umlingisi
Kianu Rivz - omunye walabo abadlali abahlukile cishe kusukela ekuqaleni kwenkonzo yakhe kudlala indima enkulu. Ngaphezu kwalokho, umlingisi uthanda ukukhetha amaphrojekthi engavamile, ngakho akumangalisi ukuthi 'wayengumuntu Johnny ngekhanda "e Filmography yakhe.
Kianu Rivz ku wama-95 kwakuvele kwaziwa kahle, kodwa izilaleli akasibonanga yisakhiwo sodumo "Matrix" nezinye imidwebo eminingi nge iqhaza lakhe, wadedelwa ngemva kowezi-2000. Kunalokho, Reeves wathandwa izinhliziyo zezilaleli indima umenzeli FBI le Thriller "Point Break" noJonathani indima fantasy ukuthusa "Dracula" obonisa Buyela Umva Oldmana. Futhi ngo '94 kwakungamadodana amaphrojekthi "Little Buddha" futhi "Speed".
Esikhathini ifilimu, Robert Longo Reeves waya uhlamvu emaphakathi. Yena izingozi yakhe ekuphileni njalo ekuvumelaneni entsha oda. Kodwa Johnny Awukwazi ukwenza ngenye indlela, ngoba izidingo imali. Isimo nge ukushushiswa mafia uthola kuye ibe ukuphela efile, kodwa ngokushesha lapha kufika usizo intombazane enhle.
"Johnny ngekhanda": nabalingisi. Dina Meyer njengoba Jane
Jane - umlingisi losemcoka, owesifazane Robert Longo. Futhi is a professional yemilindankosi. Lapho Jane ihlangabezana Johnny, it is benamandla uzwela kuye futhi enquma ukusiza insizwa. Indima welungelo anesibindi eya khona ukuba Dina Meyer.
Meyer - kakhulu abafundile intombazane. Wazalelwa e-New York, bese ngenkuthalo esikoleni sendawo enza ubuciko. Kodwa kwakunganele uDina, ngakho-ke uqale waya afundele Long Ayllendsky University, bese - encwadini edumile Paris Sorbonne.
Dean waqala wakhe i-career kwizimboni 93 th kusukela odumile uchungechunge "Beverly Hills." Ngokushesha emva kokuphothulwa iphrojekthi, yena yathola ekwenzeni lo msebenzi, "Johnny ngekhanda".
Ngo '96 Meyer waba nenhlanhla ngokwanele ukudlala omunye izindima zabo eziyinhloko e-ifilimu Rob Cohen sika "Dragon Inhliziyo". Khona-ke kwaba khona "Troopers starship" kaPaul Verhoeven. Kepha inkazimulo elikhulu art Dina akakakujulukeli. Muva nje, bayizinkulungwane ezingamashumi amane engu-actress ikakhulukazi wathwebula TV movie.
Ice-T njengoba Jay-Bon
"Johnny ngekhanda" wangenisa Filmography ka rapper Ice-T.
EMelika, Ice-T okungukuthi aziwayo ngokuyinhloko njengoba kuqala umsunguli we isitayela gangsta-rap. Yini eyenza Tracy umnkantsha (umculi ozalwa) ukubhala imibhalo on isihloko izakhiwo lobugebengu kwansuku - alaziwa. akhulela ngempela umndeni abahloniphekile nakomunye izikole Los Angeles. Khona 4 iminyaka waba yisosha.
Phakathi nenkonzo yakhe yokuba, Ice-T ukhiphe albhamu eziyisishiyagalombili, ngisho wakwazi ukuthola "Grammy". Ngo-80 Tracy balithanda cinema: ngonyaka ayesanda kuluthola umlingisi enezinkanyezi okungenani ezimbili amafilimu. Eminyakeni yamuva, igama Ice-T ngokuvamile ezishiwo ngokuqondene iqhaza lakhe encwadini edumile TV ewuchungechunge "Umthetho-oda." albhamu Umculo rapper ayisekho ukhiqiza.
Dolph Lundgren e indima umshumayeli
It Kunzima ukucabanga ukuthi wayengenza ikarati Dolph Lundgren e ezifana amafilimu ngokuthi "Johnny ngekhanda". Noma kunjalo, umdlali owaziwa Swedish kanye nomdlali wamabhayisikobho waseMelika got in indima ifilimu lomunye umshumayeli Vagabond. Singasho ukuthi umlingisi waqhubeka ukuhlola nesibindi esikhulu.
Ukuze uthintane ezemidlalo Dolph kwaphoqa kuyise, yena sasivame ukumema ekhaya amahlazo lokushaya nebhethri. Lundgren Jr. eseyingane ithambile futhi bexhwalile, ngakho akunakwenzeka ukuvimbela ubaba wakhe wequbula. Ngakho waya ejimini, futhi ngokulinganisa waqala ukuqhuba karate. Ngo arsenal of Dolph kungakabiphi wathola Championships amaningi, kanye ibhande black karate.
Ngemva kokuthuthela e-United States isikhathi eside Lundgren ubesebenza njengomshayeli bouncer kuyi-nightclub. Uze yathola ekwenzeni lo msebenzi "Rokii-4", okuyinto bekumele play eSoviet bomlilo. Bese kude siya: Adventure "The Lord universe", "Red Scorpion", "I Punisher" - nomaphi Lundgren omethembayo indima fighters isigelekeqe esinonya. Ngenhlanhla, ukuthenga mime umlingisi kwaba nomthelela kule nkinga.
Litshwayo Dolph Lundgren e ifilimu waba kumnandi action movie "Universal Soldier," lapho wabonakala ngombhangqwana Jean-Claude Vann Dame (okuyinto ngenhlanhla, naye waqala ibhola lakhe ne indima mafia Russian).
Phakathi imisebenzi yamuva Lundgren athandwa kakhulu isenzo ifilimu "The Expendables".
Okunye okumele enze kuphi abadlali
Takeshi Kitano futhi bahlanganyela ukuthwetshulwa isithombe "Johnny ngekhanda". Igama umlingisi e-United States baye bafunda ngawo-80 ngokuqondene wakhe iqhaza British iphrojekthi "Merry Christmas, uMnu Lawrence." Takeshi baphindela Japan futhi waqala ukuthwebula movie khona njengoba umqondisi. Ngo-Hollywood, Kitano wakwazi umsebenzi izikhathi ezimbalwa: yena tikhicitwe amafilimu ngokuthi "uMfoweth Yakuza" futhi "Onodoli".
Wakhanyisa ku okusalungiswa nesiJalimane actress uBarbara Sukowa. EJalimane, uBarbara ingenye best yaseshashalazini abaculi.
Le nkampani merry ungeze rocker waseMelika uHenry Rawlins, ababedlala Spider. Rawlins futhi izinkanyezi ku-American TV ewuchungechunge "samaDodana Anarchy" futhi horror ifilimu "Vula engalungile."
umlingisi German Udo uKoresi iphrojekthi Roberta Longo waya indima yakhe evamile ye sokulahlwa. Udo futhi enezinkanyezi e ifilimu "Nymphomaniac": "Welani Down Dead" futhi "Dracula 3000".
Umlingisikazi semenova Oksana: Biography nesithombe
Dzheyms Meyson: Biography, empilweni yakho, i-Filmography
John Dzheyms Rembo: Indaba iqhawe
Umuthi 'Dzozamitsin'. Imiyalo yokusetshenziswa
Izimbangela lwesigodlo linemibhikisho eRussia
Ukugqilazwa kwabantu - lena ... Umqondo ngempoqo
I-Master izinkuni zezinkuni zokugeza
Incazelo kanye nokubuyekeza: Kufika IMisa lakho (Gainer)
Impilo Corner enkulisa. Okuqukethwe kanye nomklamo